Beeldaajaha Cali Saleebaan oo Maanta ka soo Qalin jebiyey jaamacada dalka Malaysia. – RadioQandala.com
Beeldaajaha Cali Saleebaan oo Maanta ka soo Qalin jebiyey jaamacada dalka Malaysia.
Posted on 12 November, 2017 by RadioQandala
Beeldaaje Maxamed beeldaaje Ismacil Beeldaaje Xaaji Cabdilaahi beeldaaje Maxamed Ismaciil oo Maanta ka soo Qalin jebiyey jaamacada dalka Malaysia.. Beeldaajaha waxaa u ku soo taqasusay culuumta siyaada
Beeldaaje Maxamed beeldaaje Ismacil Beeldaaje Xaaji Cabdilaahi beeldaaje Maxamed Ismaciil waxaa uu ku dhashay Degmada Kismaayo sanadkii 1991 . waxaa uu ku soo barbaaray Degmada Bosaso 1991/92 halkaas oo uu ku soo dhigtay dugsigiisa hoose/dhexe xiliga xagaaga waxaa uu u bixi jiray deegaanka Turmasaale .
Beeldaaje Maxamed beeldaaje Ismacil Beeldaaje Xaaji Cabdilaahi beeldaaje Maxamed Ismaciil waxaa uu ku soo wajahan yahay Dalka Dubai kadibna waxaa lagu wadaa in lagu caano shubo .
« Kismaayo oo Sirdoonka Puntland iyo Jubbaland oo soo qabtay Askarigii Boosaaso gabadh ku kufsaday
Beeldaajaha Cali Saleebaan oo Maanta ka soo Qalin jebiyey Jaamacada dalka Malaysia. »